२०१b मा गुडबाइ र मार्केटिंगमा राम्रो छुट Martech Zone
मङ्गलबार, डिसेम्बर 31, 2013 मङ्गलबार, डिसेम्बर 31, 2013 Douglas Karr
के यो बर्ष तपाईंको लागि दुखाई छ? यो मेरो लागि गरे। यो गाह्रो वर्ष थियो किनकि मैले मेरो बुबा गुमाएँ, मेरो स्वास्थ्यले पीडित भयो, र व्यापारमा केही डरलाग्दो समस्याहरू थिए - साथै एक महान साथी र सहकर्मीसँग छुट्टिनु पर्छ। तपाईले मेरो ब्ल्ग मार्केटिंग जानकारीका लागि पढ्नुहुन्छ त्यसैले म अन्य मुद्दाहरूमा फोकस गर्न चाहन्न (यद्यपि उनीहरूले ठूलो प्रभाव पारे), म मार्केटिंग र मार्केटि Technology टेक्नोलोजीसँग सिधा कुरा गर्न चाहन्छु।
२०१ Marketing मा मार्केटिंग sucked
हामीले पूरा वर्ष सफल, सफल, बहु-च्यानल रणनीतिहरूको साथ मान्छेहरूलाई ट्र्याकमा फर्काएर व्यतीत गर्‍यौं। यस वर्ष चम्किलो वस्तुहरू जताततै थिए। हाम्रो ग्राहकहरु कोष को स्थानांतरण र धेरै प्रविधिहरु मा यस वर्ष लगानी कि धेरै वाचा र बकवास वितरित। यसले चीजहरूको ध्यान केन्द्रित गर्यो जुन हामीलाई थाहा थियो दीर्घकालीन र गतिमा काम गर्दछ। यसले योजनामा ​​राम्रो पैसा र स्रोतहरू फ्याँक्यो जुन केहि उत्पादन गर्दैन। यसले हामीबाट ग्राहकहरू चोरेको छ र जब तिनीहरू फर्किए, उनीहरूले के काम गरिरहेको छ भनेर पैसाको अभाव थियो।
व्याकुलता, झूट र दबाव
यस वर्ष मसँग ग्राहकहरूसँग कुरा गर्दा केही परिवर्तन भयो। मैले विचारको मान्छे भन्दा कोठामा कर्मुडगेन जस्तो देखिन। जति धेरै हामीले केही नयाँ नयाँ अवसरहरू तानिरहेका थिए, मलाई लाग्यो कि मैले आक्रमण गर्नुपर्‍यो र धेरैलाई बे'को ठाउँमा राख्नुपर्‍यो। हामीले लडाईं गर्यौं हाम्रो ग्राहकहरूले मोबाइल प्रवृत्ति, भिडियो चलन, र जारी सामग्री सफलतालाई बेवास्ता।
यी कम्पनीहरूको आन्तरिक दवाव भय terrible्कर थियो ... नेतृत्वले छिटो परिणामको माग गर्‍यो, बजेटमा कटौती गरे, र कार्मिक गणना घटाइयो। कम्पनीहरूले खराब निर्णय पछि खराब निर्णय गर्न बाध्य भए र गिद्ध कम्पनीहरू जसले उनीहरूको शिकार गरे उनीहरू हस्ताक्षर गर्दा, उनीहरूको पैसा लिने र उनीहरूलाई केही नरहेकोमा खुशी थिए। यस उद्योगमा मेरा धेरै साथीहरू छाड्न वा निष्कासनमा खर्च भयो। मलाई लाग्छ कि मेरो आधा लिंक्डइनमा नयाँ कम्पनीमा नयाँ शीर्षक छ।
यो वर्ष फोकस को वर्ष हो। हाम्रो ब्यापारको ग्राहकहरूको उत्कृष्ट इनबाउन्ड मार्केटिंग फाउन्डेशन छ भन्ने सुनिश्चित गर्न यसको मूल फोकसमा फर्किएको छ ठोस सामग्री, सामाजिक र खोज रणनीति जसले उनीहरूको ब्रान्डको अधिकार र जागरूकता निर्माण गर्दछ। हामी हाम्रा क्लाइन्टहरूलाई एकीकृत गर्न र टेक्नोलाई स्वचालित गर्न मद्दत गर्न जारी राख्नेछौं, तर तिनीहरूलाई विचलित हुनबाट जोगाउनुहोस्। हामी के काम गर्छौं र यस बर्षमा के गर्दैन भन्ने बारे खुला हुन गइरहेका छौं।
मलाई भविष्यवाणीहरू मनपर्दैन त्यसैले म तिनीहरूलाई बनाउँदिन। यहाँ २०१ 2014 मा हाम्रो फोकस छ र फोकस हामी हाम्रो ग्राहकहरु संग धकेलिरहेका छौं:
यो निश्चित गर्दै कि तिनीहरू अनलाइन मार्केटिंगको एक बलियो जग छ जुन उपयुक्त छ खोज र सामाजिक - ब्रान्डहरू र उनीहरू पछाडि मानिसहरूका लागि अधिकार निर्माण।
इनबाउन्ड मार्केटिंग कार्यान्वयन मापन र सीसा बिक्री र रूपान्तरण च्यानल मार्फत आगन्तुकहरू।
सम्भाव्यता, नेतृत्व, र दर्शकहरूको साथ उत्तम ईमेल मार्केटिंग र मार्केटिंग स्वत: प्रक्रियाहरूको साथ मूल्य कायम राख्न र निर्माण गर्दै।
क्यापिटलाइज गर्दै मोबाइल बृद्धि र अपनाउने - पाठ सन्देश, मोबाइल वेब, मोबाइल ईमेल र मोबाइल अनुप्रयोग सहित।
ग्राफिक्स, पेशेवर भिडियो, वेबिनारहरू, र अन्यको लागि बजेट पार्सि P गर्दै संलग्न माध्यमहरू कि जटिल लाभ छिटो व्याख्या र रूपान्तरण चक्र र दरहरु लाई सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
खोजी गर्दै प्रचार अवसरहरू जसले जागरूकता ड्राइभ गर्दछ र हाम्रा उत्पादनहरू, सेवाहरू, व्यक्ति र ब्रान्डहरू नयाँ दर्शकहरूको अगाडि प्रासंगिक छन्।
म २०१ behind को लागि तयार छु मेरो पछाडि पछाडि र २०१ underway चलिरहेकोमा! तपाईं हुनुहुन्छ?
टैग: 20132014अख्तियारईमेलनयाँ वर्षभविष्यवाणीपदोन्नतिअवधारणएसईओसामाजिक मिडिया मार्केटिङ
२०१ Small साना व्यवसाय मार्केटिंग ईच्छा सूची